10 Talooyin Sida loo abaabulo shandadaha Hand Your | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Talooyin Sida loo abaabulo shandadaha Hand Your
No macno dhererka safarka - waxa uu noqon isbuucaan a xeebta ku cararaan ama safar Himalayan ah oo saddex toddobaad soconaya - waxaad u baahan doontaa inaad xirxirto boorso cabbir kasta ha lahaadee, waxaadna dooneysaa inaad ogaato sida loo abaabulo, bartan waxaan diiradda ku saari doonaa shandadaha gacantaada. Waxaa jira waxyaabo badan oo in la tixgeliyo marka la go'aaminayo waxa la keeno: nooca iyo cimri dheer safarkaaga, aad faahfaahin, jawiga, size ee boorsooyinka, iyo wax kasta oo miisaanka xad rogeen aad hab of gaadiidka. Iyo qodobo badan oo at play, waa ay fududahay in overpack ama hoos pack, gaar ahaan haddii aad ku sugaynay ilaa daqiiqada ugu danbeysa. Iska ilaali overpacking, qodaya dhex bacaha iyo Horraanta kale marka loo hoydo aad tareen kuwan 10 talooyin ku saabsan sidii loo abaabuli lahaa shanddada gacanta.
Sida loo abaabulo Your Hand shandadaha Tip 1: Ka dhig Documents Travel Your sooca
Tani waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga fiirsado markaad go aamineyso sida loo abaabulo shandadaha gacanta. Heyso warqadaha safarka aad kala. Ma aha oo kaliya waa wax haboon in la sameeyo, laakiin sidoo kale wax ammaan ah in la sameeyo. ku rid bac yar arrintaasna waa u fududahay in ay ka saarto ka shanddada gacanta. Sidaas aadan haysan qodo mar kasta oo aad u baahan tahay baasaboor, tigidhada ama lacag.
Abaabulaan Your Hand shandadaha Tip 2: Samee List xirxirida A
Passport? Check. caday? Check. Labeenta? Waayo, nabad of maskaxda ku haysaa in aad heshay daruuriga qarisay, naftaada samee liiska safarka dhawr maalmood ka hor xiisaha safarka ayaa bilaabmaya!
Abaabulaan Your Hand shandadaha Tip 3: Iska ilaali Uskag
Ma jiraan wax ka badan dhibsado badan qaadato waqti aad u badan si ay u doortaan nooca dharka ee aad doonaysid in aad qaadato oo kaliya si aad u heshid aan xitaa u isticmaali kartaa waa! mar dambe ma qabto dhibaato this. marka hore waa in aad had iyo jeer hubi in iftiinka dharkaaga midab Axmaduu geddisan, iyo marka labaad, ceshato inay u saftay Roob hotel la tuuro una isticmaal inaad ku daboosho salka kabahaaga.
tip 4: Roll Oo Vacuum Pack
Si loo badbaadiyo meel bannaan oo jooji creasing, dharkaaga rogo halkii marna laabi, ka dibna u dhig bacaha riixo vacuum. Si aad u isticmaasho bacaha, kuwaas oo, Oo dharkiinnana waa inaad ku riday, xidh boorsada, ka dibna tuuji hawada ka baxay. Tani waxay aad ka tagto doono bannaan oo badan in aad boorso waxayna ka hortagi doontaa kala-baxa.
tip 5: boorsooyinka Safety
Quful bacaha aad iyo aad u ilaaliyo qufulan. iyagoo marka aad isticmaasho musqusha. Haddii ay taasi suurtogal ma aha oo aad keli u safraya, keenaan dhammaan waxyaabaha qiimaha leh ee aad la. Marna ha ka tegin kamaradaha, lacag, korantada ama dukumiintiga safarka unguarded.
Ka dhig qol xiran inta aad hurdeyso, haddii ay suuragal tahay. Ha isku hallaynina shisheeyayaal. Xataa si fiican gashan shisheeye laga yaabaa in ay noqon tuug. Haddii aad hurdada in qol la safra aadan aqoon, hubi in ay seexdaan on top of lacagtaada suunka si aad dareemi doonto haddii uu qof isku dayo in uu ku qaadan in aad ka.
tip 6: Isticmaal xabadaha xirxirida
” Ma jiro wax badan ka dhigaya i dareensiisay aadanaha habaysan sida ugu badan ee qaybinaya hanti aan galay xabadaha midab-ku suntan. Waa sidaas cajiib ah in si sax ah uu ogayn meel kasta oo idinka soo bixiyey waa sida ugu dhaqsaha badan aad siibka aad shandado. Plus, waxaad si fudud ugudhaqaaqi kartaa xabadahaaga wax lagu rido khaanadaha dharka huteelkaaga isla markiiba waxaa lagaa qaadi doonaa inaad xirxirto oo aad diyaar u noqoto.” - Richelle Szypulski, Editor Associate Senior
tip 7: Xadidaada Size Waayo, shandadaha Hand
Similar in diyaarado, tareenada badan waxay leeyihiin xanibaadyo saaran cadadka iyo size of bacaha in laguu oggol yahay si ay u fuliyaan on. Guud, waxaad awoodi doontaa inaad si ay u fuliyaan on dhammaan boorsooyinka noqon doonaa, laakiin waxaa laga yaabaa in aad side tareenka aad u baahan tahay si loo hubiyo boorsooyinka xad-dhaaf ah ay dhacdo waxa ay ka badato qaadaan on size ama miisaankiisu xayiraad. Waayo, tareenada ugu, waxaad qaadi kartaa laba kiish on board tareenka, ilaa iyo inta boorso kasta kama badna 50 rodol ama ka badan 28 X 22 X 14 inches. waxyaabaha yaryar iyo shakhsiga sida qalabka caafimaadka iyo dawooyinka, barkimo, bustayaal, coolers, oo kiishash ama bacaha ka yar 12 X 12 X 12 inches aan la tirin doonaa xagga qaadiddan on xadka Alaabtoodii.
tip 8: Qalabka In shandadaha Hand
Sidee ayaad sida caadiga ah loo abaabulo oo dhan ee aad korontada, fiilooyinka, kuwa gelinno fiddly in aad qaadato da'doodu u qodo soo baxay at ammaanka? iyaga alaabtiisu sida dadka kale oo naga mid ah? Well, haddii aad rabto in aad habayso boorsooyinka gacanta ka dibna adigu heli qabtay shixnad of bacaha ziplock. xeedho Phone, camera xeedho, adapters, headphones - qaadan bacaha balaastikada ah oo dheeraad ah (kuwa la mid ah oo aad u isticmaali lahayd dareere boorsooyinka gacanta) waxayna u isticmaalaan in ay ku kaydiso alaabta korontada, wax guriga safarka (furayaasha guriga, tigidh la dhigto, iyo furaha gaariga), daawo iyo qalab kale oo furan.
tip 9: Sida loo qaado Books. ma samayn!
Haddii ay tahay in uumi bixiya novel hindiga, dhehay Sayniska-fi, ama hagaha eyga la jeexin, safarka ah, waxaa soo bixi ka hor inta aad safarka. Xataa haddii guriga aad tahay warqad til waxaan sort dhiman, badbaadiyo meel bannaan oo miisaan aad boorsooyinka gacanta iyo ma qaban tirin on wifi in ay dib ugu boodaan sheekada ka kursi xeebta si fiican u taagan yahay, si fudud u hubiso in ay tahay qalabka biyaha ah u adkaysta daboolay.
tip 10: Saar Waxa All Out
Anigu waxaan ahay super kharriban. Waxaan qiran. Oo kala daadsan! Laakiin waxa igu caawisaa in madaxa layga heli toos ah xitaa marka aan santuuq at daqiiqadii ugu dambaysa, waa aan waqti ay ku soo baxay jiifsaday wax walba qaataan ka hor inta wax kasta oo tagaa kiish aan. Kooxaynta wax wada ayaan sariirtayda iga caawisaa in si deg deg ah u aragto waxa items ma jiid miisaankooda. Laba surwaal in kaliya la xidhan karo oo leh hal top, ama u baahan in kabaha la ii aan horay qorsheyneysa in ay alaabahooda? Back in dhaansha, waxaad aadi! Wax walba oo sifiican u arkaa kahor intaanan bilaabin sidoo kale waxay iga caawineysaa inaan waxyaabo kujiro boorsadeyda si macquul ah. Aniga ahaan, taas macnaheedu waa laga bilaabo waxyaabaha aan bulkiest, markaas cherry gaaray waxyaabaha fudud si gelin meelihii jajabnaa hareerahooda si ay u sameeyaan lakabka adag saldhig in la dhiso ilaa ka.
Hayso talooyinkan caawiyay aad xisaabiso sidii loo abaabuli lahaa shanddada gacanta? Waxaan jeclaan lahaa in la ogaado! Jartaan tikidhka tareenka marayo Save A tareenka iyo dhaqso ah Siiyay Goolhaye of shanddada gacanta ka dib markii la isticmaalayo talooyinkan!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “10 Talooyin Sida loo abaabulo shandadaha Hand Your” gal your site? sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-organize-hand-luggage%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#shandad #luggagetips #xirmooyinka #shandado